Maxaa Maanta Kala Qabsaday Farole Iyo Cabdi Weli Gaas? – Puntland24.net
Home Somalia, Wararka Maanta, Xulka Puntland Maxaa Maanta Kala Qabsaday Farole Iyo Cabdi Weli Gaas?
Madaxweynaha Puntland Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas iyo Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdi Raxmaan Farole, ayaa maanta isweydaarsaday hadalo kulul, intii lagu guda jiray Munaasabada lagu daahfray garoonka diyaaradaha ee Garowe.
Cabdi Raxmaan Farole, ayaa sheegay in Cabdi Weli Cali Gaas mudadii uu Ra’iisul Wasaaraha ka ahaa Soomaaliya uu hor istaagay Mshaariicda lagu dhisayay garoomada Boosaaso iyo Garowe, waxaana uu xusay inuu fasaxay Mashruuc garoon looga dhisay Soomaaliland.
Farole ayaa sheegay inuu dadaal badan u galay sidii Mashruucan loo fasixi lahaa, isagoo sheegay inuu keenay Mashruucan, isla markaana uu wali daba joogo dhamaystirkeeda.
Cabdi Raxmaan Farole, ayaa sheegay inuu u mahadcelinayo Xukuumaddii Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo fasaxday hirgalinta Mashaariicdan.
Madaxweynaha Puntland Cabdi Weli Cali Gaas oo u jawaabayay Farole, ayaa sheegay inuusan doonayn inuu jawaab bixiyo oo madasha aysan ahayn madasheedii, balse uu leeyahay” Caano ninkii la yaqaan uu maalay ninkii raba ha sheegto”.
Si kastaba ha ahate, arrimahan ayaa kuso aadaya xilli maanta la Daahfuray garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ee Caasimada Puntland.